अमेरिकी अश्वेत व्यक्तिको हत्यामा ट्रोलको शिकार बन्दै बलिउड अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी, २२ जेठ । अमेरिकामा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लाँयडको प्रहरीद्वारा हत्यापछि माहौल तात्तिएर अहिले ४० शहरमा कर्फ्यू जारी भएको छ । यो विरोध प्रदर्शनलाई हरेक क्षेत्रका हस्तीहरुले खुलेर समर्थन गरिरहेका छन् ।
यसबीच यसै विषयमा बलिउड अभिनेत्री करिना कपूरले पनि सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट शेयर गरिन् । उनले जर्ज फ्लाँयडका लागि न्याय माग गर्दै सबै रंग सुन्दर भएको कुरा लेखेकी थिइन् । अर्को पोस्टमा करिनाले टाइम म्याग्जिनको एउटा पुरानो एडिटेड कवर शेयर गर्दै फ्लाँयडका लागि न्यायको माग गरिन् । तर उनको यस्तो पोस्टलाई कतिपयले मन पराएनन् र उनी ट्रोलको शिकार हुन पुगिन् ।
एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘भारतमा स्थिति अझ बढी खराब छ किनभने धेरै लोकप्रिय सेलेब्सहरु गोरो छालाजन्य सामग्रीलाई बढावा दिन्छन् । जसले नस्लीय भेदभावलाई दर्शाउँछ । कृपया उनीहरु भएको ठाउँमा जानुहोस्, उनीहरुलाई शिक्षित बनाउनुहोस् र यस्तो विज्ञापनलाई बढावा दिने काम बन्द गर्नुहोस् । आफ्नो छालाको रंगमा खुशी हुनुहोस् ।’
अर्का प्रयोगकर्ताले गोरोपनका लागि लक्सको विज्ञापन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै अभिनेत्री दिशा पटानीले पनि सबै रंग सुन्दर हुने भन्दै पोस्ट शेयर गरेकी छिन् । उनलाई पनि करिनालाई जस्तै ट्रोलको शिकार बनाइएको छ । यस्तै जब प्रियंकाले उक्त मामिलाबारे पोस्ट गरिन् तब सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले अभिनेत्रीले आफ्नो देशको मामिलामा नबोल्ने तर अमेरिकाको मामिलामा अभियन्ता बन्ने भनेर ट्रोल बनाएका छन् ।
फ्लाँयडका लागि न्याय माग्दै हलिउडका धेरै सेलिब्रेटीहरु बियोन्से, कार्डी बी, टेलर स्विफ्ट, जोन बोयेगा, जोन चिडो, स्टीव कोरैल, निक जोनस, प्रियंका चोपडा, रिहाना, बेला हादीद र जैनेल मौने जस्ता सेलिब्रेटी पनि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् ।
सुशान्त आत्महत्या प्रकरणः शेखर कपुरले ईमेलमार्फत बयान पठाए, आफैं आउन प्रहरीको उर्दी
बन्दाबन्दीमा दर्शक स्रोतालाई प्रकाश सपुतको उपहार- नमस्कार
पुनः काममा फर्किइन् सन्नी लियोनी, सार्वजनिक गरिन् छायांकनको फोटो
प्रमोद खरेलको ‘अरुलाई माया’ सार्वजनिक
Entertainment, मनोरञ्जन, सिनेमा
रणवीर र कट्रिना पहिलोपटक एकसाथ पर्दामा देखिने
बलिउडमा देखिएको नयाँ प्रतिस्पर्धा
प्रकृति रक्षाको लागि शाकाहारी बन्ने शिल्पाको घोषणा
सुशान्त सिंह राजपुतको अन्तिम चलचित्र ‘दिल बेचारा’ को ट्रेलर रिलिज, शुभचिन्तकहरु भावुक
मामाले जोगाउन सकेनन् भान्जाको बलिउड करिअर
भाइरल शेफालीको सौन्दर्य
भाजपा सांसदद्वारा सुशान्त आत्महत्या प्रकरणलाई सीबीआई जाँचको माग
जब आफ्नै शोमा ट्रोल भए करण……..
ओस्कारमा ऋतिक रोशन र आलियालाई निम्ता
धमलापत्नी एलिजाको गुनासो – म पनि नातावादको शिकार भएकी छु
गलवान भ्यालीमा भएको घटनालाई लिएर अजय देवगनले फिल्म निर्माण गर्ने
सरोज खानलाई सम्झिदै भावुक भए शाहरुख र काजल
टिकटकको विकल्प बन्दै मोज एप, २ दिनमा ५० हजार डाउनलोड
बलिउडकी चर्चित नृत्य निर्देशक सरोज खानको निधन
किन ‘ओभररेटेड’ मानिन्छ सलमानको यो चलचित्र ?
इन्स्टाग्राममा गरेको एक पोष्टबाट २ लाख डलर !
नातावादको आरोप खेपिरहेकी आलियाले गरिन ‘सडक-२’ का पोस्टर शेयर
सिबी अधिकारी/काठमाडाैं, २६ असार । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने आन्तरिक...
काठमाडौं, २५ असार । नेपाली भारतीय न्युज च्यानलहरु प्रसारणमा रोक लगाइएको छ । विदेशी च्यानल वितरक मल्टि सिस्टम अपरेटर (एमएसओ)...
टोटनहममा कठिन दिनको सामना गर्दै प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्हो
काठमाडौँ, २६ असार । यस सिजन ठुलो आशाका साथ टोटनहमले अनुबन्ध गरेका प्रशिक्षक हुन् जोसे मोउरिन्हो । उनका विगत हेर्ने हो भने...
पोखरामा मध्यरातमा पहिरो, चार जनाको मृत्यु, नौजना घाइते
पोखरा, २६ असार । अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परी गए राति पोखराका विभिन्न स्थानमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ जना घाइते...